Kurambidzwa kwekufamba kweOmicron kutsva kuri kutyisidzira kupora kwekufamba nendege
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Kurambidzwa kwekufamba kweOmicron kutsva kuri kutyisidzira kupora kwekufamba nendege
Airlines • nhandare yendege • Nhau Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
The International Mhepo Yekufambisa Sangano (IATA) yakazivisa kuti kudzoreredza mukufamba nendege kwakaenderera mberi muna Gumiguru 2021 nekuvandudzwa kwakadzama mumisika yemumba neyekunze.
Yakayambirawo kuti kudzikwa kwezvirambidzo zvekufamba nehurumende, zvichipesana nezano re World Health Organization (WHO), zvinogona kutyisidzira kupora kwechikamu.
Nekuti kuenzanisa pakati pa2021 na2020 mhedzisiro yemwedzi nemwedzi yakakanganiswa nekukatyamadza kuita kweCCIDID-19, kunze kwekunge zvacherechedzwa neimwe nzira mifananidzo yese ndeye Gumiguru 2019, iyo yakatevera yakajairika yekuda maitiro.
Kudiwa kwese kwekufamba nendege muna Gumiguru 2021 (kuyerwa mumari yevatakuri makiromita kana maRPK) kwaive pasi ne49.4% zvichienzaniswa naGumiguru 2019. Izvi zvakavandudzwa pamusoro pekudonha kwe53.3% kwakanyorwa munaGunyana 2021, zvichienzaniswa nemakore maviri apfuura.
Misika yemumba yaive yakadzikira 21.6% kana ichienzaniswa naGumiguru 2019, ichivandudza kudzikira kwe24.2% kwakanyorwa munaGunyana kana Gunyana 2019.
Kudiwa kwevatyairi vepasi rose muna Gumiguru kwaive 65.5% pazasi Gumiguru 2019, zvichienzaniswa nekudzikira kwe69.0% kwaGunyana maringe nenguva ya2019, nematunhu ese ari kuratidza kuvandudzwa.
“Mafambiro emumigwagwa yaGumiguru anosimbisa kuti vanhu vachafamba kana vachinge vatenderwa. Nehurombo, mhinduro dzehurumende pakubuda kweiyo Omicron musiyano iri kuisa panjodzi kubatana kwepasirese kwayakatora nguva yakareba kuvaka patsva, "akadaro. Willie Walsh, Director General weIATA.